ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: တစ်နေ့လျှင် 5000 အစုံ
Leukocyte ဖယ်ရှားရေး filter s for Single Use is designed to remove the leukocytes and micro-aggregate in blood and protect patients from leukocyte-related transfusion complications such as GVHD diseases and adverse reactions etc.
ကျန်နေတဲ့ WBC 106 / ယူနစ်×လျော့နည်းthan≤1.0ရေတွက်
အမြင့် RBC ပြန်လည်နာလန်ထူrate≥90%
Micro-စုစုပေါငျးမြား၏ 100% ဖယ်ရှားရေး
ဒါဟာ Pre-filtration, filter ကို, ထိုပိုက်လိုင်းများ, လေ filter ကိုပါဝင်ပါသည်။
1.Pre-filtration သွေးထဲမှာ Micro-စုစုပေါင်းဖယ်ရှားလိုက်ပါနဲ့ main filter ကိုဝင်ရောက်သည့်ပူဖောင်းတားဆီးပါလိမ့်မယ်
2.The filter က leukocytes filtered နှင့်စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှိရာအဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
3.The ပိုက်လိုင်းများအဆိုပါဆားဖြေရှင်းချက်ပိုက်လိုင်းနှင့်အသွေးကိုပိုက်လိုင်းထားရှိရေး။ filtration ပြီးနောက်ဆားဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ပိုက်လိုင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်, ပိုက်လိုင်းအတွင်းသွေးနီဆဲလ်တွေနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
4. Air ကို Filter ကိုစစ်ထုတ်ကိရိယာအစုံသို့အမှုန်တားဆီးပါလိမ့်မယ်။
ယခင်: soft Shell က Leukocyte လျှော့ချရေး Filter ကို
နောက်တစ်ခု: Medical Virus Inactivity Apparatus for Plasma
Leukocyte filter မှတပါး
သွေး Leukocyte filter
တစ်ခါသုံး Leukocyte လျှော့ချရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Filter
ဓာတ်ခွဲခန်း Leukocyte filter
Leuko လျှော့ချရေး Filter ကို
Leukocyte Filter ကို
Leukocyte filter ထုတ်လုပ်သူ
Leukocyte Filter ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
Leukocyte Filter ကိုစျေး
Leukocyte လျှော့ချရေး Filter ကို (ရာဘေး)
Leukocyte လျှော့ချရေး filter (စက် Shell က)
Leukocyte လျှော့ချရေး filter (အနု Shell က)
Leukocyte လျှော့ချရေး Filter ကို Fot ရာဘေးကိုအသုံးပြုခြင်း
Leukocyte လျှော့ချရေး Filter ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
Leukocyte လျှော့ချရေး filter သတ်မှတ်မည်
Leukocyte လျှော့ချရေး filter သတ်မှတ်မည် (သွေးဘဏ်)
Leukocyte ဖယ်ရှားရေး filter
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Leukocyte filter
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Leukocyte လျှော့ချရေး Filter ကို
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Leukocyte လျှော့ချရေးစိစစ်မှုများ
သွေးသွင်း Leukocyte filter
လက်ကား Leukocyte Filter ကိုစျေး